Dadka Ingiriiska waxay u maleynayaan in waji-xidhka wejiga lagu sii wado xirashada duullimaadyada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dadka Ingiriiska waxay u maleynayaan in waji-xidhka wejiga lagu sii wado xirashada duullimaadyada
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
In kasta oo la fududeeyay xannibaadaha, haddana dadka intooda badani waxay weli dareemayaan inay sax tahay oo ay habboon tahay in la xidho maaskaro wejiga duulimaadka, iyadoo la raacayo siyaasadda shirkado badan oo diyaaradeed.
Saddex ka mid ah afar ka mid ah dadka qaangaarka ah ee Boqortooyada Midowday waxay u maleynayaan in waji-xidhka waji-xidhka ay tahay inuu sii wato xirashada rakaabka ee duullimaadyada, sida lagu sheegay cilmi-baaris la sii daayay maanta (Isniin 1 Noofambar) WTM London.
Waxaa jira heshiis ballaadhan oo dhammaan kooxaha da'da ah, laakiin waa kuwa ka weyn 65s kuwa ugu badan ee doonaya in ay arkaan xeerka la ilaaliyo, ayaa daaha ka qaaday Warbixinta Warshadaha WTM, oo lagu sii daayay WTM London, oo ah dhacdada hormuudka ah ee caalamiga ah ee warshadaha safarka, kaas oo dhacaya kuwa soo socda saddex maalmood (Isniinta 1 - Arbacada 3 Noofambar) ee ExCeL - London.
Marka lagu weydiiyo: Ma dareentay in waji-xidhka wejiga lagu xidho diyaaradaha? 73% ayaa ku jawaabay haa – aad ayuu uga sarreeyaa 14% ee khilaafay. Inta soo hartay 13% waxay sheegeen inaysan hubin.
Kooxda da'doodu ka weyn tahay 65 sano waa qaybta bulshada ee ugu taageerada badan, iyadoo 82% ay yiraahdeen maaskaro waa in la gashado diyaaradda dhexdeeda, waxay muujineysaa ra'yi ururinta 1,000 macaamiisha UK.
Kuwa da'doodu u dhaxayso 25-64 waxay ku dhow yihiin inay si siman u qaybsamaan heshiiskooda, 73% ee 55-64s; 74% ee 45-54s; 73% 35-44s iyo 72% 25-34s iyagoo leh rakaabku waa inay xidhaan waji-xidho.
Jiilalka da'da yar, 62% ee 18-21s iyo 60% ee 22-24s waxay aaminsan yihiin in shirkadaha duullimaadyadu ay sii wadaan inay xirtaan waji-xidhka waji qasab ah.
Xeerarka xidhashada waji-xidhka ayaa isbedelay England 19-kii Luulyo, markii xayiraadaha la fududeeyay.
Laga soo bilaabo 19-kii Luulyo, hadda ma ahayn shuruud sharci ah in la xidho maaskaro wajiga gudaha gudaha Ingiriiska, in kasta oo Boris Johnson uu ku booriyay dadweynaha inay sii wadaan daboolida wejigooda 'meelo cidhiidhi ah oo xidhan'. Sharciyo adag oo waji-xidhka ayaa ka shaqeeya Wales iyo Scotland.
Inta badan shirkadaha diyaaradaha, oo ay ku jiraan Ryanair, EasyJet, TUI iyo Jet2 waxay ku shaqeeyaan siyaasad waji-xidhka qasabka ah ee dhammaan rakaabka da'doodu tahay lix iyo wixii ka weyn, iyo sidoo kale shaqaalaha qolka, haddii aan laga dhaafin.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: "Sida cad, in kasta oo la fududeeyay xannibaadaha, dadka intooda badan waxay weli dareemayaan inay sax tahay oo ay habboon tahay in maaskaro wajiga lagu xidho duulimaadka, iyadoo la raacayo siyaasadda shirkado badan oo diyaaradeed."